Tag: Somaliland | Sagal Radio Services
Somaliland oo ku baaqday in dib loo bilaabo wada hadaladii ay la lahaayeen dowladda Somalia
Maamulka Somaliland ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wada hadaladii ay la lahaayeen dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaddib marki wada hadaladan ay istaageen sanad ka hor.
Biyo la'aan baahsan oo ka jirta Berbera
Magaalada Berbera ayaa waxaa ka jirta biyo la'aan baahsan gaar ahaan xaafadaha qaar.
Somaliland oo sheegtay in aanay jirin cid ku matasha doorashada Soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa sheegay in aanay qeyb ka aheyn hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ee bisha October dhici doona, iyadoo cadeysay in aanay jirin cid ku matasha.
Axmed Siilaanyo “Somaliland qeyb kama ahan Soomaaliya, hadii Federaal tahay iyo hadii kaleba”
Sagal Radio Services • News Report • April 16, 2016
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya inay daan-daansi ku wado dowladdiisa, isagoo naqdiyay go’aamadii ka soo baxay shirkii Madasha wadatashiga qaran.
Wasiir kale oo iska casilay Xukuumadda Somaliland iyo Siilaanyo oo Wasiiro cusub magacaabay
Sagal Radio Services • News Report • October 28, 2015
Khilaafka Xisbiga talada haya ee Kulmiye ayaa cirka sii galay, iyadoo ay Wasiiro hor leh iska casilayaan xilalkooda, waxaana goor dhoweyd magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay inuu is casilay Wasiirkii Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Prof. Faarax Cilmi Maxamuud Geedoolle.
Faah faahin ka soo baxaysa Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland oo lagu afduubtay Gobolka Sanaag
Dabley Hubeysan ayaa shalay ku afduubatay meel 50-KM u jirta magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland oo uu ku jiro Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Somaliland ee Gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi.
Deegaanno ka Tirsan Gobolka Sool oo Maanta Siyaabo kala Duwan looga Xusayo Maalinta 18-ka May
Xuska 18-ka May oo ah maalintii ay Somaliland sheegtay inay ka go’aan Soomaaliya inteeda kale ayaa saaka loo qoondeeyay inay ka dhacdo xarunta gobolka Soo loo maalmihii lasoo dhaafay la diyaarinayay.
Madaxweynaha Somaliland oo mar kale isku shaandheyn ku sameeyay Wasiiro iyo xilal kale
Sagal Radio Services • News Report • March 15, 2015
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa isku shaandheyn ku sameeyay xilalka Wasiiradda iyo xilal kale, iyadoo tani ay tahay markii labaad oo muddo saddex todobaad gudahood uu isku shaandheeyo Wasiirro.
Guddoomiyeyaasha Gobollada Awdal iyo Sanaag oo ka Bad-baaday Weerarro
Badhasaabka gobolka Awdal, Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, ayaa sheegay in baabuur ay wada saarnaayeen isaga iyo badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fallaay in jid-gooyo loo gallay, haseyeeshee ka badbaadeen.
Golaha Guurtida Somaliland oo laalay mooshinkii laga waday Gudoomiyaha Golaha Wakiilada
Sagal Radio Services • News Report • November 23, 2014
Gudiga dhex dhexaadinta ee Golaha Guurtida Somaliland ayaa maanta soo afjaray khilaafkii ka dhashay mooshinkii xil ka xayuubinta ee laga gudbiyay Gudoomiyaha Golaha Wakiilada C/raxmaan Cirro, kaasoo ay wadeen Xildhibaanada muxaafidka, waxaana mooshinkaas uu sababay inuu hakad ku yimaado kulamadii Golaha Wakiilada.
Madaxweyne Siilaanyo “Cidna ka yeeli meyno in Nabadgelyada ay qalqal geliso, Xisbiyadu ma ahan in…”
Sagal Radio Services • News Report • November 16, 2014
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay Golaha Wakiilada Somaliland iyo rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Burco, kaasoo rasaas ay fureen Ciidamada booliska ay sababtay dhimasho iyo dhaawac.
Daawo sawiradda:Siilaanyo oo Xariga ka jaray Qaadashadda Baasaboorka Cusub ee Somaliland
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa si rasmiya u furay qaadashada Baasboorka Somaliland ee Cusub ee loo yaqaano E-passport-ka.
GEEDOOLE: “Wax-soo-saarku Muhiimad ayuu u leeyahay Dalka iyo Bulshada”
Sagal Radio Services • News Report • September 5, 2014
Madaxda Wasaaradda Beeraha, Ciidanka Miitariga iyo daneeyayaasha wax soo saarka dalka ayaa shalay ka qayb galay munaasibad lagu soo gurayey dalag ka soo go’ay Mashruuca beerista Banka Wajaale.
Milateriga Somaliland oo sheegay inay gacanta ku dhigeen Ilaaladii Cali Khaliif
Ciidanka Militariga Somaliland, ayaa sheegay in habeen hore ay gacantii ku soo dhigeen gaadhigii uu lahaa Cali Khaliif Galaydh iyo laba askari oo ilaalo u ahaa.
Somaliland oo ka Hadashay dib u dhigtay wadahadalkii ay kula jirtay Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay inay dib u bilaabmayaan wada hadaladdii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya.
Siilaanyo oo mar kale murashax ah
Sagal Radio Services • News Report • May 9, 2014
Wasaaradda warfaafinta ee maamulka Somaliland ayaa shaacisay in madaxweynaha maamulkaas ee talada haya, Axmed Maxamed Siilaanyo uu mar kale isu sharrixi doono xilka madaxweynennimo.
Somaliland oo soo dhaweysay qodobbadii shirkii London
Sagal Radio Services • News Report • May 8, 2013
Maamulka Somaliland, ayaa soo dhaweeyay war-murtiyeedkii ka soo baxay shirkii London ee shalay, kaas oo looga hadlayay dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Somaliland oo u digtay dalxiisayaasha qaar
Sagal Radio Services • News Report • March 2, 2013
Wasiirka Dhalinyarada, Cayaaraha iyo Dalxiiska Somaliland Md. Cali Saciid Reygan, ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah ee deegaannada Somaliland imaanaya inay gurtaan oo ay qaataan waxyaabaha qaddiimiga ah ee deegaannada Somaliland yaalla.
Laanta socdaalka Somaliland "Waxba iskama baddalin reer galbeedkii imaan jirey Somaliland"
Sagal Radio Services • News Report • January 30, 2013
Laanta socdaalka Somaliland, ayaa sheegtay inaanay waxba iska badalin dadkii ajaaniibta ahaa ee reer galbeedka imaanayay deegaannada Somaliland, tan iyo markii dhawaan dowladda Ingiriiska ay soo saartay digniino ku wajahan dadka reer galbeedka ee jooga gudaha Soomaaliya oo ay Somaliland ka mid tahay.
Barnaamij lagu hormarinaayo dowladaha hoose ee Somaliland oo Hargeysa lagu qabtay
Wajiga labaad ee barnaamij lagu hormarinaayo dowladaha hoose ee Somaliland, ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ee Somaliland.
Ciidamada Somaliland oo is-hortaagay siyaasiyiin reer Somaliland ah oo Muqdidsho ku soo jeeday
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2012
Ciidamada Maamulka Somaliland ayaa is hor-taagay siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay maamulkaas, kuwaasoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho, iyagoo loo diiday inay raacaan diyaarad taagneyd garoonka diyaaradaha Ber-bera.
Somaliland oo kala dhex-gashay beelo ku dagaallamay Sool
Sagal Radio Services • News Report • November 19, 2012
Ciidamada maamulka Somaliland, ayaa kala dhex galay laba beelood oo wada dega deegaanka Darayo Xinbalanbal oo u dhow degmada Xuddun ee gobolka Sool, ka dib markii uu soo kala dhex galay muran ku saleysan daaqsiinka.
Somaliland oo ka hadashay xilka DF ay u magacowday Fowsiyo Yusuf Xaaji Aaden
Maamulka Somaliland, ayaa ka hadlay xilka sare ee wasiirnimo ay dowladda federaalka Soomaaliya u magacowday Fowsiyo Yusuf Xaaji Aaden, oo ka mid ah aqoon yahannada ka soo jeeda deegaannada maamulka Somaliland.
Banaanbax lagu taageeraayo raysal wasaaraha cusub oo ka dhacay Laascaanood
Banaanbax lagu taageeraayo raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa waxa uu ka dhacay shalay galinkii dambe degmada Laascaanood ee maamulka Somaliland.